Ukuthandana nomntu onomhlaza: Ngaba unayo into eyenzayo? - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuthandana nomntu onomhlaza: Ngaba unayo into eyenzayo?
Ukuba ufuna umntu oza kukukhusela, indoda enguMhlaza liqabane omele ukulikhetha. Imihla yomhlaza kuphela ukuba kukho ithuba lolwalamano olonwabisayo, nolwanelisekayo. Umhlaza osele uthandana nomnye umntu wayenokucinga kwangaphambili kwasekuqaleni kobudlelwane.
Indoda yomhlaza ikhangela umntu oyiqondayo indlela avakalelwa ngayo kwaye onokunika inkxaso. Olu luphawu lweemvakalelo. Amadoda omhlaza ngabahlobo abalungileyo nabacebisi abathembekileyo ongasokuze ufune ukuba neentloni xa unemvakalelo.
Ngokukhawuleza ukuba indoda e-Cancer iqale ukukuthemba, uyakumangaliswa yindlela acinga ngayo ukuba ungaziva njani.
Uyayazi into amakayenze kwiimeko zoxinzelelo lweemvakalelo kwaye uya kukunceda woyise umzuzu. Kodwa ulumke xa umjikelezile njengoko ethanda ukungaze alibale ukuba ukhe wamcaphukisa. Uyakumba izinto zakudala xa ungazilindelanga.
Indoda eCancer ayifani namanye amadoda e-zodiac. Uyayonwabela incoko emnandi kwaye unovakalelo. Unabahlobo abaninzi njengoko ethembekile kwaye ethembekile, kodwa kusafuneka ube ngoyena usondela kuye. Akazithembi kangako.
Uya kuba nobubele nothando xa enobuhlobo. Musa ukucinga ukuba akanomdla kuba uthule kwaye ugcinwe. Kwanele ukuvula incoko kunye naye kwaye yonke into iya kuba mnandi kwaye ibe nobomi.
Kunzima kancinci ukuphumelela imbeko kunye nokuthembela kwendoda yeCancer. Uthintelwe kwaye unxibelelwano lokuqala naye aluzi lula. Ayingomntu okwaziyo ukwenza into ethandwayo luthando, kodwa uyathandeka xa ewela umntu.
Indoda yomhlaza iya kuba nenkathalo nothando kunye neqabane layo. Uya kumnika ikhaya elifudumeleyo kwaye uya kubeka umzamo omkhulu ukuze ubudlelwane bube lula. Oku kubalulekile kumntu ofuna ukuhlala naye.
Indoda yomhlaza ikrelekrele, izimisele, iyakhathala kwaye inyanisekile. Iqabane lakhe kufuneka lifane naye, njengoko ubukrelekrele kunye nezinye iimpawu ezikhankanyiweyo zimtsala.
Iphupha lendoda yomhlaza malunga nolwalamano olufezekileyo kubandakanya iqabane eliqhotyoshelwe kwicala lasekhaya lobomi njengoko linjalo. Oku akuthethi ukuba uyakuba ngaphakathi endlwini kuphela emva kokuba nindawonye.
Ujonge nje umntu ofuna usapho, kwaye ubeka ingqalelo kwaye ajonge ukuba iqabane lakhe lingenza umzali olungileyo kunye nomntu wasekhaya. Unomnqweno onamandla wokuba nosapho ngaxa lithile ebomini bakhe.
Xa ethandwa ngabanye, indoda yeCancer iyona nto ibhetele. Ukuqukumbela, menze azive exabisekile kwaye ngokuqinisekileyo uya konwaba amaxesha amnandi ecaleni kwakhe.
Eyaziwa ngokuba ngabagcini benkwenkwezi, amadoda eCancer aya kwenza amaqabane abo azive ethandwa ngokwenene.
Ukuba usebudlelwaneni, okanye uthandana noMhlaza, phindisela ngento akunike yona kwaye uvumele izinto zenzeke ngokwazo.
iimpawu zomoya kunye neempawu zamanzi
Uyaluxabisa uxanduva kwaye uya kuba yindoda egqibeleleyo yosapho. Ngokubhekisele ekukopeni, lo mqondiso uzinikezele kangangokuba akanakuba nobuganga bokucinga ngako.
Unokudibana nabantu abathandayo, ke ubuncinci bezinto ezinokubakho bunokuziswa kwingxoxo apha.
Ebuthathaka, ngekhe abe nesibindi okanye abe krwada. Uyakubaleka abaleke abantu abalolu hlobo. Akangxami ngobudlelwane, avumele izinto zithathe ikhosi yazo yendalo.
Intuitive, indoda yeCancer iyakwazi ukuqikelela iimvakalelo zabanye abantu kwintliziyo. Ngamanye amaxesha uyanikezela kutyekelo lokuzifumanela kwaye akufumanise kunzima ukuyeka izinto ezimkhumbuza ixesha elidlulileyo.
Izandla kwiingcebiso zokuthandana
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, indoda yomhlaza incamathele kakhulu ekhaya. Ngomhla, unokumcela ukuba achithe ikhaya ngokuhlwa. Unokukhetha eyakhe ngaphezu kweyakho njengoko eyazi indlela yokwenza izinto ngokugqibeleleyo xa ukwindawo eqhelekileyo.
Bukela imovie. Uya kukhetha into enomdla kakhulu, ke lungela amanyathelo okuqala. Uya kupheka into njengamadoda amaninzi eCancer alungile ekhitshini.
pisces umfazi kunye nendoda sagittarius ebhedini
Lo mzuzu usekhaya lakhe ukuba ube nomhla, unokuqiniseka ukuba kunjalo. Ungummandla, ke kuya kufuneka ukhetheke kuye ukuba wamkele ukuza kuthi ga ngoku kwindlwana yakhe ethambileyo.
Intshukumo enye, uyathanda ukuyenza xa utsalelekile emntwini, kukubuza ukuba anganazi ngcono kancinci. Cofa kuTwitter
Ukuba luphawu lwaManzi, indoda yoMhlaza iyakonwabela nayiphi na indawo ecaleni kwamanzi. Ulwandle, ichibi, okanye umlambo ziindawo ezintle onokuhamba kuzo nomhla wakho womhlaza.
Ungaze uzame ukumenza enze izinto. Ayingomntu othanda abantu abamgwebayo, kwaye uyakwenza oko ukulindeleyo kuye kuphela ukuba uyazi ukuba kuyonwabisa.
Ngelixa kuyimpepho yokuba ngumhlobo wale ndoda, ukuphumelela uthando kuye ngowona mceli mngeni. Akawi thandweni ngokulula kwaye uthando lokubhangisa luyintsomi kuye. Xa ethanda umntu, ngequbuliso uyathandana kwaye avuleke.
Nangona kunjalo, kuthatha ixesha ukuba kwenzeke oku. Unokuba ngokulukuhla njengoko ufuna, akazukuwela kuwe ngokulula. Uya kuyeka iindlela zakhe zokuzikhusela ezantsi kuphela ukuba ucinga ukuba unomdla kwaye ungamzisela intuthuzelo.
Indoda ethanda ukuhlala ngokwesiko, indoda yomhlaza ayizukutsi ebhedini ukusuka kwimihla yokuqala. Kuphela emva kokuba eseke unxibelelwano lokwenyani neqabane, aya kuthi akhulule amandla akhe ezesondo. Ebhedini, uyakwazi ukuzisa ulwaneliseko olupheleleyo.
Ngokukhawuleza uqagela into efunwa liqabane lakhe kwaye uyamhlangula. Uyakuthanda ukwenza uthando ngokubeka iimvakalelo zakhe etafileni kwaye ungoyena uziva kakhulu esifubeni.
yintoni horoscope may 5
Uyayithanda indawo yesifuba nakumaqabane, ke yiba nesibindi sokubonisa ucoceko oluncinci xa ufuna ukumqhula. Ayinamsebenzi into othanda ukuyenza ebhedini, uya kuziqhelanisa nobuchule bakho kunye nemibono ukuze umdlalo uphakame kwaye kunzima ukugcina ulwazelelo ngokwesini kumntu onomhlaza.
Banabalingani nabo, kwaye banokutshatyalaliswa ukuba umntu ufuna ukwahlukana nabo. Baphazamiseka ngokweemvakalelo.
Iimpawu zomntu womhlaza eluthandweni, kwikhondo lomsebenzi nakubomi
Ngaba amadoda omhlaza anobukhwele kwaye anokuphila?
INeptune kwindlu yokuqala: Ibuchaza njani uBuntu bakho kunye noBomi
I-Sagittarius Sun Umhlaza weNyanga: Ubuntu boLuntu
I-sagittarius indoda kunye nomhlaza womfazi
yintoni uphawu lweenkwenkwezi lomatshi wama-25
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Agasti 15
I-pisces indoda kunye ne-aquarius yomfazi ebhedini
Umhlaza womntu unescorpio umfazi iingxaki
leo mfazi virgo indoda yohlukana